अष्ट्रेलिया आउने नेपालीको संख्या बढ्यो, नेपालीको रोजाई पढाई,पैसा कि पीआर ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया, अब नेपालीका लागी विदेश हुन छोडिसक्यो। हरेक वर्ष २० हजार भन्दा धेरै नेपालीहरू अष्ट्रेलियामा अध्ययन तथा कामका लागी आउन थालेपछी अष्ट्रेलियामा नेपालीको संख्या सँगै अष्ट्रेलिया आफ्नै लाग्नु स्वभाविक हो। त्यसो त अष्ट्रेलियालाई नेपालीहरूले नेपालको ‘आठौं प्रदेश’ भन्न थालिसकेका छन्। नेपालीको अष्ट्रेलिया बसाईं र त्यसको नेपालमा प्रभावले यतिखेर नेपालमा अष्ट्रेलियाको ‘चार्म’ मात्र बढेको छैन अष्ट्रेलिया नेपालका हरेक जसो शहरी युवाको सपनामा बसिसकेको छ। अष्ट्रेलिया आउने नेपालीको संख्याको वृद्दिदर हेर्द छिट्टै अब नेपालमा ‘एक घर एक अष्ट्रेलिया’ नहोला भन्न सकिन्न।
पछील्लो समय नेपालीहरूले अष्ट्रेलियमा कलेज खोल्न थालेपछी नेपालबाट सानो उमेरमा नै अष्ट्रेलिया आउनेको संख्या धेरै बढेको छ। नेपाली मूलको भएका कारण र गैरआवासिय नेपाली ‘एनआरएन’को माध्यमबाट नेपालमा राजनीति रूपमा समेत सहज पहुँच हुने भएपछी अष्ट्रेलियामा कलेज खोल्ने र त्यसको प्रचार नेपालका प्लसटु, प्लसटु पुगेर गर्नेहरूको संख्या अधिक हुन थालेको छ। जसले आफ्नो व्यवसायको विज्ञापनसँगै नेपाली किशोरहरुमा ‘अष्ट्रेलियन सपना’ बेचिरहेका छन्। जसले गर्दा नेपालका साना ठूला सबै शहरका किशोरहरू १८ कट्दा नकट्दै अष्ट्रेलियामा ‘शर्टिफिकेट’, ‘डिप्लोमा’ पढ्न अष्ट्रेलिया हान्निने बनेका छन्।
‘अष्ट्रेलियन ड्रिम’ बोकेर सिड्नी, मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिजबेन झर्ने नेपाली युवाहरुले अष्ट्रेलियामा भेट्ने ‘अप्सन’ चाहिँ तीनवटा हुने गरेको छ जसलाई अष्ट्रेलियाका तीन ‘पी’ भनिन्छ। पहिलो हो पढाई दोस्रो पैसा अनि तेस्रो चैं ‘पीआर’। नेपालमा ‘कन्सल्टेन्सी’ले जे भने पनि यी तीनवटै पाउनु वा यीनबाट पार पाउनु भने त्यति सजिलो छैन।
अष्ट्रेलियाको पढाई नेपालको भन्दा बिलकुल फरक छ। यहाँको विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले सातामा दुई देखी तीनदिनको कक्षा राखेका हुन्छन् भने बाँकी कोर्स पास हुन आवश्यक ‘एसाइनमेन्ट’ तयार पार्ने र जाँच पास हुनका लागी चाहिने दक्षता आफैले पढेर बनाउनु पर्छ। यहाँको कक्षा पनि ५०-६० ‘स्लाईड’ देखाएर सकिने खालको हुन्छ, बाँकी किताब किनेर वा पुस्तकालय बसेर आफ्नो ज्ञानको दायरा आफैले बढाउनु पर्छ। नेपालमा लेख्ने र पढ्ने बानी नभएकाहरूलाई ‘एसाइनमेन्ट’, ‘प्रिजेन्टेसन’हरूले हैरान खेलाउन सक्छ भने जाँच पनि पास हुन त्यति सजिलो छैन। साना कलेजहरूमा पढ्नेहरूलाई पास हुन केही सहज भएपनि अष्ट्रेलियामा पढाई अनुसारको काम पाउनका लागी बने राम्रो विषय र विश्वविद्यालय पढ्नु र त्यसै अनुसाको सिप र दक्षताको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ। जुन सुन्दा सामान्य लागेपनि नेपालबाट आएर अष्ट्रेलियाको सबै खर्च चलाउँदै विश्वविद्यालयको शुल्क समेत जोहो गर्नुपर्नेहरूलाई ‘नामुम्किन नहिं पर मुस्लिल बढी है भाई ‘ भने जस्तो छ।
नेपालमा हुने धेरैलाई लाग्छ अष्ट्रेलियामा सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ। जुन धेरै हदमा सत्य पनि हो, अष्ट्रेलियामा पैसा कमाउन नेपालमा भन्दा सजिलो छ। तर यो कुरा मात्र पुरा होईन। कमाएको पैसा मध्ये कति जोगाउन सकिन्छ? कति आफ्नो गोजीमा रहन्छ? भन्ने महत्वपूर्ण हो। सामान्य एक ‘सिफ्ट’को काम गर्नेले सातामा कमाउने भनेको एकहजार देखी १५ सय डलरको बीचमा हुन्छ। यसमा रेल, बस को भाडा, कोठाभाडा, खाना, घरायसी सामान सबैको खर्च कटाउँदा जोगिने भनेको २०० देखी ४०० डलर मुस्किलले हुन्छ। त्यसमा हरेक ‘ट्राईमेस्टर’को कलेज तथा ‘यूनि’को ‘फि’ तिर्नुपर्ने दायित्वलाई हिसाब गर्ने हो भने कमाई ऋणात्मकमा जानसक्छ। ‘शर्टिफिकेट’, ‘डिप्लोमा’ पढ्नेहरूको ‘फि’ सस्तो भएपनि उनीहरुको काम पाउने, गर्ने र कमाउने क्षमता ‘मास्टर्स’ वा सो भन्दा माथिको तहमा पढ्न आउनेको जस्तो हुँदैन।
‘मास्टर्स’ वा सो भन्दा माथिको तहमा पढ्न आउनेले पढाई र कमाईलाई प्राथमिकतामा राखेर अष्ट्रेलियाको बसाईंलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने पढाई सकेपछी ‘टीआर’को दुई वर्षको अवधिमा भने राम्रो कमाई र जोगाई गर्न सक्छन्। तर, यस क्रममा अष्ट्रेलियाको ‘पीआर’ लिने हो र त्यसका लागी तयारी गर्ने हो भने पैसा कमाउने कुरा सजिलो हुँदैन।
अष्ट्रेलियामा धेरै विद्यार्थी पढ्न आउनुको कारण नै यहाँ पाउन सम्भावना भएको ‘पीआर’ नै हो। नेपालबाट हेर्दा पढाईमा औसत र आर्थिक रुपमा ठिकै खालको परिवारको विद्यार्थीले अहिले अष्ट्रेलिया आँक्न सक्छ। नेपालमा ४०-५० लाख जतिको ऋण एक दुई वर्ष धान्न सक्ने क्षमता भएकाले यतिखेर छोराछोरीलाई अष्ट्रेलिया पठाई रहेका छन् यो आशामा कि पढेर ‘पीआर’ पायो भने केही गर्न सक्छ। तर, अष्ट्रेलियामा पढ्न आउँदैमा यहाँको ‘पीआर’ पाउने भन्ने हुँदैन। कस्तो ‘कोर्ष’ अनि कति क्षमता भएको व्यक्ति हो भन्ने कुराले यहाँको ‘पीआर’का लागी योग्य हुने नहुने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसमा पनि भारत, चिन लगायतका अरू देशका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीले अंग्रेजी, नेपाली साथै अभिव्यक्ति कला र पढेको विषय अनुसाको दक्षता हाँसिल गर्नै पर्छ।
यदी पीआरलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने अष्ट्रेलियामा माग भएका क्षेत्रमा आफ्नो पढाई र कामलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ। यदी अष्ट्रेलियामा स्थायि रूपमा नै बस्ने योजनाका साथ नेपालबाट आउने हो भने ‘मास्टर्स’ भन्दा तलको तहमा आउँदा सजिलो नहुन सक्छ। नेपालमा ‘स्नातक’ सकेर दुईचार वर्ष आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएको खण्डमा अष्ट्रेलियामा नेपालबाट नै वा अष्ट्रेलिया आईसकेपछी ‘पीआर’ ‘अप्लाई’ गर्न सकिन्छ।
यदी तपाईं नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउने सोचमा हुनुहुन्छ या अष्ट्रेलियामा पढिरहनु भएको छ भने तपाईंले आफ्नो प्राथमिकतालाई अष्ट्रेलियाको माग र तपाईंको सपना अनुसार तय गर्नु पर्छ। यदी तपाईंको पढाई राम्रो छ भने तपाईंले पैसा र पीआर पाउन गाह्रो नपर्ला। तर यदी पढाई राम्रो छैन भने चाहिँ तपाईंले आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकारेर भविष्यको योजना बनाउनु सही हुन्छ। अष्ट्रेलियामा पढाईमा राम्रो गर्न नसकेका धेरैले आफूलाई ‘ट्रेड अकुपेसन’मा केन्द्रित गरेर राम्रो कमाईका साथ पीआरको संभावना पनि बढाइ रहेका छन्।
नेपाली पेजवाट लिईएको खोजमूलक समाचार